Farmajo oo ku howlan qorshe lagu arbushayo doorashada - Warbixin | KEYDMEDIA ONLINE
Farmajo oo ku howlan qorshe lagu arbushayo doorashada - Warbixin
Madaxweynaha, xilligii uu mucaaradka ahaa wuxuu Madaxdii ka horreysay ku eedeyn jiray kursi jacayl, maanta asigaa ka sabri la' Villa Somalia.
KISMAAYO, Soomaaliya - Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo muujiya in uu diyaar u yahay doorasho waqtigeeda ku dhacdo ayaa hadana waxa uu abaabulayaa sidii loo arbushi lahaa dorashada.
Farmaajo oo dareensan inuu haysto culeys siyaasadeed oo aad u weyn ayaa waxa uu doonayaa in doorashada qalqal la geliyo, isaga oo jabinaya mid ka mid ah qodobadii ay ku heshiisyeen isaga iyo maamul goboleedyada.
Heshiiska ayaa dhigayey in gobolka Gedo lagu wareejiyo Jubbaland, ciidamada DFS laga soo saaro, lana geeyo ciidamada maamulkaasi. Hase ahaatee Farmaajo oo dareensan waxa Jubbaland ay sameyn doonto haddii aanu qodobkaasi fulin ayaa bilaabay ku adkeysiga in ciidanka DFS joogaan Gedo, welibana doorasho lagu qabto gobolkaasi.
Jubbaland ayaa durba shaacisay in Farmaajo aanu dooneyn in doorasho ay dhacdo maadaama heshiisyadii uu ka baxay. Sidoo kale, waxyaabaa la filayo ayaa ah in Axmed Madoobe duulaan ku qaado gobolkaasi, mar haddii heshiiska looga baxay.
Sida Keydmedia Online ay saakay soo qortay, Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ku dhawaaqay guluf dagaal oo ay ku qaadi doonaan gobolka Gedo si ay uga saaraan Ciidamada Farmaajo uu halkaasi geeyay dhawaan.
Isagoo ka hadlayay kulan ka dhacay Kismaayo, ayuu Madaxweyne ku-xigeenka oo ay isku qabiil yihiin Farmaajo, kana soo jeedo Gedo sheegay in Jubbaland ay dib ula wareegi doonto degmooyinkii ay ka qabsadeen Ciidanka Haramcad ee laga keenay Muqdisho.
Farmaajo ayaa doonaya in duulaan la qaado, sidoo kalena qalqal ku yimaado hannaankii doorashada.
Heshiiiska muxuu ahaa?
Hesiiska ayaa dhigaya in labo degaan ay ka dhacdo doorashadda Maamul kasta, islamarkaana madaxda Dowlad Goboleedyada loo madax-baneeyo qabashadda iyo maareynta codbixinta, oo ay iska kaashanayaan gudiyada isku dhafka ah.
Axmed Madoobe ayaa dhawaan sheegay in Jubbaland aan gacanta ugu jirin Gedo, islamarkaana ay dowladda Farmaajo hareermartay heshiisyada siyaasadeed ee lagu gaarey wadahadalladii ka dhacay Muqdisho.
Wuxuu ku eedeeyay Farmaajo inuu Jabhado ka abuuray gobolka, oo hadda maamulkiisa loo dhiibay dad laga keenay Caasimadda dalka oo aan matelaynin danta dadka degaanka. Axmed Madoobe ayaa balan-qaadey inaysan doorasho ka dhacaynin Jubbaland, illaa gacantiisa lagu soo celinayo Gedo.
Doorashada Jubbaland ayaa ka dhici laheyd Kismaayo iyo Garbahaarey, laakiin Garbahaarey oo ka tirsan gobolka Gedo, waxey haatan ku jirtaa gacanta Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kahor doorashada Ciidamo geysay.
Waa arrin ay siyaasiyiin badan la yaabeen nidaamkan uu ku dhaqmayo Madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha, xilligii uu mucaaradka ahaa wuxuu Madaxdii ka horreysay ku eedeyn jiray kursi jacayl.
Kooxda Al-Shabaab ayaa wali beegsi ku haysa Saldhigyadda Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Shir DF iyo Beesha Caalamka Muqdisho uga furmaya
Warar 24 January 2021 9:06